Christiane Taubira waxay raadineysaa magdhow waaxyada dibedda, dhibanayaashii ugu horreeyay ee addoonsiga - Afrikhepri Fondation
Christiane Taubira waxay magdhow ka raadsataa waaxaha dibedda ee Faransiiska, dhibanayaashii ugu horreeyay ee addoonsiga
EDhaqaaleyahan, cilminafsiyeedka cilmu-nafsiga ah, agaasimihii guud ee hore ee xiriirka Caribbean iyo MP, Christiane Taubira waxay soo jeedisay 1999 in addoonsiga iyo tahriibinta lagu tilmaamo inay yihiin dembiyo ka dhan ah aadanaha. Codsigani wuxuu calaamad u yahay marxalad muhiim u ah taariikhda xiriirka ka dhexeeya Faransiiska iyo gumeystihiisii ​​hore, 150 sano ka dib markii laga takhalusay addoonsiga. Christiane Taubira waxay codsatay in tixgalinta la siiyo suurta galnimada magdhawga maaliyadeed ee waaxda dibada (DOM), dhibanayaashii ugu horeeyey ee addoonsiga iyo tahriibinta. Codsigan waxaa diidey Guddiga Sharciga, laakiin hindise sharciyeedka waxaa si wada jir ah u aqbalay wakiillada jooga.
“[….] Mawduuca aan ka soo qaadnay maahan wax qabad daraasad lagu barto. Sababta oo ah waxay noqon doontaa waqti in nabada iyo xasilloonida la yimaado si ay u jilciso boogta qotada dheer ee waraabisa shucuurta aan la buuxin, maxaa yeelay waxay noqon kartaa wax dhib badan in laga maqlo sharraxaadda astaamaha qaarkood ee waxa jiray. aafo dheer oo argagax leh sababta oo ah taariikhdu ma ahan saynis dhab ah […] Warbixintaani ma ahan sheeko taariikhi ah […]
Ma aha qoraalka filimka naxdinta leh, oo qaadaya liiska silsiladaha, irbadaha, qoryaha, qoryaha, suunka iyo shinbiraha loo qorsheeyay oo loo hagaajiyay si aan bini-aadanimo lahayn. Mana aha eedeyn, sababtoo ah dambigu maaha mid la dhaxlo oo sababtoo ah ujeedooyinkeena ma aha aargudasho. Ma aha codsi loogu talagalay towbad keenka sababta oo ah cidina ma lahaan doonto fikradda ah in la waydiiyo ficil qoto dheer oo qumman oo ku saabsan Jamhuuriyadda Soomaaliya, oo qiimaha aasaasiga ahi uu kobciyo diidmada caddaaladda. Ma aha jimicsiga cathartic (taas oo nafsad ahaantaada ka soo jiidata waxa la cadaadiyo, qallafsan ama cadaadis) sababtoo ah kacdoonka sokeeye wuxuu nagu soo rogaa xishmad adag. Sidoo kale ma aha xirfad rumaysad, sababtoo ah maanan weli qadarin dadkeena oohin. Hase yeeshee, waxaan qeexi doonnaa denbiga, shaqada illowday, aamusnaanta, oo sheega sababaha loo siinayo magac iyo xaaladdan xayawaankaas. Laga bilaabo bilawgii, shirkadda waxaa lagu calaamadeeyey guntin. Shan iyo toban sano ayaa ku filan si buuxda looga baabi'iyo Haiti markii ugu horeysay ee dadka deggan, Amerindians. Inkastoo ay jirtay 11 million oo kuyaal Maraykanka oo 1519, waxay ahaayeen hal milyan oo kaliya 2,5 dhamaadkii qarnigii lixaad. Waxaa si deg deg ah loo xaqiijiyay: waxay ahayd qayb ka mid ah hawlgalka muwaadiniinta, oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo beelaha aan waxba galabsan, waxay isku dayday inay xaqiijiso in dib loo furo qaar ka mid ah. Waxaa la sharciyeeyay by Cham ee ku habaaray habaaray. (oo tixraacaya wiilka labaad ee Nuux iyo farcankiisa, awowayaashood sida ku cad Kitaabka Quduuska ah ee dadyowga madow ee Afrika ee haba yaraayeen) [...] Ka ganacsiga iyo addoonsiga ayaa aad u xoog badnaa. Tirooyinka sheeganaya in ay soo koobaan waa kuwo aad u naxdin leh.
1978, dib u eegis dhamaystiran ee ganacsiga addoonta ah iyo addoonsiga ee Faransiiska ayaa la dhisay. Waxay u muuqataa sida awoodda addoonta ah ee saddexaad ee Yurub. Sidaa daraadeed, waxay ku dhaqantay ganacsiga, ganacsigaan, ganacsigaan, gaadiidkaas oo ujeeddadoodu tahay dahab, lacag, dhir udgoon. Waxaa lagu soo koobay kuwa kale, dadka kale, addoonsiga oo qofka ku soo celiya maxbuus, isaga oo xayawaan culus iyo hantida kale.
code madow (ka yar boqortooyadii Louis XIV, Xeerka kuna baahinayaa faafinta ee 1685, talin xaaladda addoonsiga ee deegaanada Faransiis iyo nolosha addoomo madow gasiiradaha Waxaa ansixiyay. (ansixinta sharci ka dhigaya sax ah (fal ) waa dhaqanka ee ganacsiga xagalka ah), taas oo waafaqsan sharciga Faransiis joogay muddo ku dhow laba qarniyo, dhigayaa in adoonka waa goosin ka mid ah alaabta guriga iyo adoonka sii daayey ayaa ixtiraam, qofafka ayuu sayidkiisii ​​hore, carmallo, carruurtiinnuna . ganacsiga addoonta socday afar qarniyo, tan iyo hageyaasha ugu horeysay gaaray Cape Bojador in 1416, de Oro Rio (qaybta koonfureed ee Sahara ka). Waxa ugu dhakhsaha badan caddaatay in Native Americans lagu naxariis darro ah le'edeen by addoonsiga, xadgudub, hawl, cudur, khamriga, dagaalladii resistor.The Dominican wadaadkii Bartolomé de Las Casas, kuwaas oo la soo jeediyey in la ilaaliyo, soo jeediyay soo dejinta weyn ee A. Fricans, ayaa lagu qaddariyaa inay noqoto mid xoog badan.
Shan iyo soddon milyan oo qof, sida laga soo xigtay kala duwan ee taariikhyahanadu, haweenka, carruurta, dadka oo, soo gaaray ganacsiga iyo addoonsiga iyo ka badan tahay, in la yidhaahdo, iyo toddobaatan milyan, haddaynu aad u xajinno qiyaasta taas oo dhigayaa in addoon in Ameerika yimid, afar ama shan lagu dilay weerarrada, ku taal jidka loo maro xeebaha, guryaha addoomada Gorée eE Ouidah, Zanzibar iyo inta lagu jiro isgoyska.
Ganacsiga meheradaha aan caadiga ahayn waxaa lagu fuliyay si ku saleysan dano gaar ahaaneed ama mid dowladeed danaha gaarka ah ama sababaha dowliga ah. Nidaamka addoonsiga waxaa loo abaabulay agagaarka geedaha gobolka (sharci ka mid ah qayb ama qayb ka mid ah hantida guud) barwaaqo ama barwaaqo ah sida kuwa wadaaddada iyo deganeyaasha gaarka loo leeyahay. Muddo aad u dheer, ilaa 1716 shirkadaha iskaa wax u qabso ah ka reebay wax qabad gaar ah (gaar ahaan shirkadda 'Compagnie des indes occidentales', oo uu abuuray Colbert sanadkii 1664, ka dibna shirkadda reer Seenegalese ee sanadkii 1674. Laakiin horumarinta dhaqaalaha geedaha, qarniyadii hore ee Iftiinka, furitaanka markabkan wuxuu ahaa mid lama huraan ah Waraaqaha patent (cadeynta badda ee xaaladda fayadhowrka markabka bixitaanka) ee Janaayo 16, 1716 ayaa ogolaaday dekedaha Rouen, Saint-Malo, La Rochelle, Nantes iyo Bordeaux inay ka ganacsadaan ka ganacsiga tahriibka, oo ka dhan ah labaatan rodol madaxa madow oo lagu soo rogay jasiiradaha iyo ka dhaafista canshuurta dhoofinta […] Rabshaddan iyo naxariis darada ayaa aad u badan inay sharxaan, waayo qayb weyn, aamusnaanta u muuqata inay soo dhowaato oo horseedda heshiis wada-hadal ah oo u dhexeeya mas'uuliyiinta dawladda, oo doonayey inuu dadka ka dhigo mid hilmaami kara iyo farcankii addoonsiga, kaasoo doonayey inuu iloobo. […] Waxaan halkan u joognaa inaan nidhaahno ka ganacsiga iyo addoonsiga, inaan dib u xasuusano in Iftiiminta lagu calaamadeeyay kacdoon ka dhan ah xukunka kaniisadda, baahida loo qabo xuquuqda aadanaha , baahi weyn oo loo qabo dimoqraadiyadda, laakiin sidoo kale inaan dib u xasuusto, in muddadan, dhaqaalaha abuurku uu si aad ah u kobcayay in ganacsiga saddexagalka ahi uu yaqaanay heerarkiisa ugu sarreeya inta u dhaxaysa 1783 iyo 1791. Waxaan halkaas u joognaa inaan nidhaahno haddii Afrika waxay ku dhacday xaalad aan horumar ahayn, waxay sidoo kale sabab u tahay jiilalka wiilashoodii iyo wiilashoodiiba waa laga adkaaday; in haddii Martinique iyo Guadeloupe ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha sonkorta, ay ku tiirsan yihiin suuqyada la ilaaliyo, haddii Guyana ay dhibaatooyin badan kala kulmaan sidii ay u maarayn lahaayeen hantideeda dabiiciga ah (gaar ahaan qoryaha iyo dahabka), haddii Réunion lagu qasbo in laga ganacsado illaa hadda dariskeeda, waa natiijada tooska ah ee gumaysiga u gaar ah; in haddii dhulku qaybinta sidoo kale aan loo sinnayn, ay tahay cawaaqib xumadii ka dhalatay nidaamkii guriyeynta.
Waxaan halkan u joognaa inaan sheegno in ganacsiga addoonta iyo addoonsiga ay ahaayeen iyo dembi ka dhan ah aadanaha; [...] Tani waxay soo galo sharciga, erayganu xoog, unambiguously, erayga rasmiga ah waa ku ool ah iyo calaamad magdhaw, kan ugu horreeyey iyo malaha ugu awoodda badan oo dhan. Laakiin waxaa xaadiriyaan siyaasadda dayactir tixgelinayo aasaaskii aan qummanaynu badda off shirkadaha lala addoonsiga, oo ay ku jiraan magdhow degayaashu raacay baabiiyo. Waxa kale oo uu qabanayaa magdhaw ah moral in propels Nuurka diidmada ah ee string oo la-xidhkii by kuwa istaagay Africa, waayo, tallow (addoommo orday) nooc oo iska caabin keentay oo dhan deegaanada, by tuuladu iyo shaqaalaha Faransiis, halganka siyaasadeed iyo ficil ee faylosuufiinta iyo abolitionists.
Waa (qoraalkan sharciga ah) wuxuu soo jeedinayaa in magdhawgan la isku daro dadaalada la sameeyay ee lagu tirtirayo cunsuriyadda, in la garto asalka iskudhacyada qowmiyadeed, in lagu wajaho cadaalad darrooyin been abuur ah. Waxay u baahan tahay hagaajin dhaqameed, gaar ahaan dayactirka meelaha xusuusta ah […] Laakiin waxaan ku wada socon doonnaa kala duwanaanshaheena, maxaa yeelay waxaa nala baray xaqiiqada layaabka leh ee ah in haddii aan sidaa u kala duwanahay, ay tahay sababta midabada ku sugan yihiin nolosha oo noloshu ku dhexjirto midabyo, iyo in dhaqamooyin iyo naqshado, markay dhexgalaan, ay yeeshaan nolol badan iyo olol badan. […] Léon Gontran Damas (1912-1978), Guyanese gabayaa iyo kuxigeenka hantiwadaagga ee Guyana, Isuduwaha aasaasaha dhaqdhaqaaqa dayacan ee Aimé Césaire iyo Léopold Sédar Senghor: waxay ku qaylinayeen xanaaq: "Waxaan dareemayaa inaan awood u leeyahay inaan weligiis qaylo ka dhanka ah kuwa igu hareeraysan oo iga hor joogsada inaan nin noqdo ”.
Hadal ku saabsan Golaha Qaranka ee 18 Febraayo 1999
Codka haweenka - Hadaladan waa weyn ee astaan ​​u ah taariikhda
5 cusub oo ka yimid € 21,50
4 waxaa laga isticmaalay € 42,98
Iibso 21,50 €
laga bilaabo Sebtember 17, 2020 4:40
Taariikhda lagu sii daynayo 2019-03-07T00:00:01Z
Publication Taariikhda 2019-03-07T00:00:01Z
Burburinta hubka, dagaalku wuxuu burburiyaa nafaha
Hagaha Chakra (PDF)
Nuxurka is-xaqiijinta - Paramahansa Yogananda (Audio)